Tottenham 3-0 Arsenal: Spurs Oo Soo Noolaysay Rajadeeda Tartanka Champions League
HomeWararka CiyaarahaTottenham 3-0 Arsenal: Spurs oo soo noolaysay Rajadeeda tartanka Champions League
May 13, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska 0
Tottenham ayaa guul wayn ka gaartay tartanka loogu soo baxayo Champions Leaque-ga kadib markii ay 3-0 kaga badisay Arsenal oo hal saac ku ciyaartay 10 ciyaartoy.
Laba gool oo midkood rikoodhe ahaa oo qaybtii hore uu dhaliyey Harry Kane Daqiiqadii 22aad iyo 37aad iyo mid uu ku daray Heung-min Son bilowga qaybta labaad Daqiiqadii 47aad ayaa Tottenham siiyey guul 3-0 ah oo ay ka gaadhay Arsenal oo toban ciyaartoy ku dheelaysay inta badan ciyaarta, kaddib markii kaadh casaan ah la siiyey difaaca reer England ee Rob Holding oo daqiiqaddii 33aad garoonka ka baxay markii uu qalad ku galay Son.
Rob Holding ayaa qabsaday Son oo aan khatar badan ku ahayn goolkiisa, waxaana uu si dheel-dheel ah ku qaatay kaadh digniin ah daqiiqaddii 26aad, halka uu kaadh labaadna ku qaatay isla xiddiga reer South Korea ee Son daqiiqaddii 33aad.
Ciyaartan oo ahayd kulankii labaad ee abid ay labada kooxood wada ciyaaraan maalin Khamiis ah ayay Tottenham ku xaqiijisatay in saaciidadu la socoto ciyaarista habeenkan oo kale. Sannadkii 1972kii ayay sidan oo Kale habeenimo uu Jimce soo gelayo ay labada kooxood ugu ciyaareen garoonkii hore ee Arsenal ee Highbury, waxaana 2-0 ku badisay Tottenham.
Mikel Arteta ayay kala doorashooyinku ku yaraadeen, waxaana uu waqti horeba aqbalay in laga badiyey oo aanu helayn fursad uu kaga daba yimaaddo Tottenham oo kubbad fiican ciyaaraysay, sidoo kalena difaaceedu aad u xoogganaa.
Ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay 3-0 ay guushu ku raacday Tottenham oo kaalinteedii shanaad fadhida, waxaanay hal dhibic ka dambaysaa Arsenal oo afraad ku jirta oo haysata 66 dhibcood. Labada kooxood ayaa isku marnaan doona labada kulan ee hadhay, midkooda la qabto ayaana lumin doona booska kaalinta afraad ee loogu soo baxayo Champions League.